पाकिस्तानले भारतमा आयोजना हुने टी–२० विश्वकपबहिस्कार गर्ने ! यस्तो छ कारण - News20 Media
January 26, 2020 January 26, 2020 N20LeaveaComment on पाकिस्तानले भारतमा आयोजना हुने टी–२० विश्वकपबहिस्कार गर्ने ! यस्तो छ कारण
एजेन्सी- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पिसिबी)ले भारत एसिया कप खेल्न आउँदैन भने आफूहरु पनि टी-२० विश्वकप खेल्न नजाने बताएकाे छ। २०२१ मा भारतले टी-२० विश्वकप आयोजना गर्दैछ।
‘एसिया कप पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने निर्णय पाकिस्तानको हैन न यो आईसीसीले नै भनेर भएको हो । कुन देशमा गर्ने भन्ने निर्णय एसीसीको हो र एसीसीले नै पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो,’ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी वसिम खानले भने । ‘हामीहरुले एसिया कप दुई स्थानमा खेलाउने भनेर तयारी गरिरहेका छौं । तर यदि भारतले पाकिस्तानमा एसिया कप नखेल्ने हो भने हामी पनि भारतमा विश्वकप खेल्न जादैनौं ।’
एसिया कप टी-२० यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुँदैछ। पिसिबीका सिइओ वसीम खानले शनिबार याे जानकारी गराएका हुन्। उनले पिसिबीले बंगलादेश टीम पाकिस्तानमा खेल्न आए एसिया कप हस्तान्तरण गर्ने छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएकाे बताए। उनले याे हल्ला मात्रै भएकाे जिकिर गरे।
‘हामीलाई एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी)ले होस्टिंग अधिकार दिएको छ। हामी कसैलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौं। हामीसँग त्यो अधिकार छैन,’ वसीमले भने, ‘एसिया कप आयोजना गर्न पिसिबीले अरु दुई स्थानमा विचार गरिरहेको छ।’
वसीमले भारतसँगको तनावका कारण पाकिस्तानले एसिया कपको आयोजना गर्न अन्य दुई स्थान विचार गरिरहेको बताए। टीम इन्डियाले २००८ देखि पाकिस्तानको भ्रमण गरेको छैन भने पाकिस्तानको टीमले पनि २०१२ पछि भारत भ्रमण गरेकाे छैन।
बार्सिलोना भ्यालेन्सीयासँग पराजित
स्पेनिस ला लिगामा साविकको विजेता टोली बार्सिलोना पराजित भएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोना भ्यालेन्सीयासँग पराजित भएको हो । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा भ्यालेन्सीयालाई जित दिलाउन म्याक्सिमोनो गोमेजले एक गोल गरे । एक गोल भ्यालेन्सीयाले आत्मघाती उपहार पाएको थियो ।
पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेको बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा कमजोर बन्दै दुई गोल खान पुगेको थियो । ४८ औँ मिनेटमा गोमेजले गोल गर्दै भ्यालेन्सीयालाई अग्रता दिलाए । ७७ औँ मिनेटमा गोमेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई २–० गोलको जित दिलाए ।
यो हारसँगै बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा अग्रता बनाउने अवसरबाट बञ्चित भएको छ । २१ खेल खेलेको बार्सिलोना ४३ अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको रियल मड्रिड पनि समान अंक छ । रियलले एक खेल कम खेलेको छ ।
जित निकालेको भ्यालेन्सीया ३४ अंक सहित तालिकाको पाँचौ स्थानमा छ ।